गृहपृष्ठ » अमेरिका » अमेरिकी राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भइसक्नुभएकी सञ्जिता प्रधानको विश्वले गर्व गर्ने छवि
काठमाडौं । सञ्जिता प्रधान एक सफल नेपाल आमाकी सन्तानको रुपमा आफूलाई उभ्याउन सफल नाम हो ।
नेपाली मूलकी सञ्जिताले विगत १५ वर्षदेखि अमेरिकामा शरणार्थी र आप्रवासीहरूसँग विभिन्न सरकारी हैसियतमा काम गरिरहनुभएको छ ।
सञ्जिता क्याथोलिक च्यारिटीहरूमा पुनर्वास निर्देशक समेत बन्नुभयो ।
यतिमात्र हैन उहाँ बाराका ओबामा राष्ट्रपति हुँदा एसियाली र प्रशान्त टापुवासीहरूका लागि राष्ट्रपतिको सल्लाहकार आयोगमा आयुक्तको रुपमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
नेपाल, इराक, बर्मा, इरिट्रियन, सुडान, लाइबेरिया, ट्युनिसिया, पाकिस्तान र अन्य धेरै देशहरूका हजारौं शरणार्थीहरूलाई पुनर्वास र एकीकृत गर्न उहाँले मद्दत गर्नुभएको छ ।
उहाँ अमेरिकामा रहेका गैरकानूनी रुपमा पुगेका विश्वभरीका नागरिकका लागि सारथी बन्नुभएको छ । कयौँ नेपालीलाईपनि त्यहाँ कानूनी हैसियत दिन योगदान दिनुभएको छ ।
सञ्जिता प्रधान मानव अधिकार विभाग, एसियाली र प्यासिफिक आइल्याण्डर अफेयर्स अफिस अफ एसिया र प्यासिफिक आइल्यान्डर अफेयर्समा २०१३ मा सामेल हुनुभयो ।
यी प्रणालीका समस्याहरूलाई गहिरो स्तरबाट हेर्न र कम प्रतिनिधित्व भएकाहरूका लागि उपयुक्त सेवाहरूको वकालत गर्न उहाँले उक्त कार्यकालमा सफल हुनुभयो ।
एसियाली र प्रशान्त टापुवासी मामिलाको कार्यालयको कार्यकारी अधिकृतको रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो । सञ्जिताले भाषा, यातायात, सांस्कृतिक ज्ञान र उहाँहरूमा रहेको नयाँ प्रणालीमा मिलाउने, घुलमिल गराउन शरणार्थीहरू र आप्रवासीहरूको आवाज बन्नुभयो ।
मानव अधिकार विभागमा रहँदा सञ्जिताले राज्यमा एसियाली र प्यासिफिक आइल्यान्डरहरू (एपीआई) को लागि वकालत गर्न केन्द्रीय स्थायी एजेन्सीको रूपमा सेवा गर्नु, राज्य विभाग र एजेन्सीहरूको प्रयासमा एपीआई व्यक्तिहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न समन्वय र सहयोग गर्ने काम गर्नुभयो । राज्यको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुने र अनुरोध गर्नेहरूलाई प्रत्यक्ष सहायता गर्ने कार्यमा उहाँ अब्बल हुनुभयो । त्यही अब्बलता देखेर
मे ८, २०१५ मा सञ्जितालाई राष्ट्रपति ओबामाले एसियाली अमेरिकी र प्रशान्त टापुवासीहरूका लागि राष्ट्रपतिको सल्लाहकार आयोगमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। यस भूमिकामा, सञ्जिताले एसियाली अमेरिकी र प्यासिफिक आइल्यान्डवासी समुदायका ठूलो गुन लगाउनुभएको छ ।
एसियाली अमेरिकी र प्यासिफिक आइल्यान्डर समुदायहरूलाई संघीय सरकारका कार्यक्रमहरू जोड्नुभयो ।
हालपनि उहाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग एकदम निकट हुनुहुन्छ । नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार र विस्तारका लागि उहाँसँग बेला–बेला परामर्श लिने गर्नुभएको छ ।
संखुवासभाको चैनपुर पुर्खेउली घर भएकी उहाँले अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरुको खाका (प्रोफाइल) लेख्ने गर्नुहुन्छ ।
धरानको बिजयपुर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनपछि उहाँले भारतको इण्डिया इन्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा अध्ययन गर्नुभयो । अमेरीका पुगेपछि भने उहाँ सामाजिक काम तथा शरणार्थी ब्यवस्थापनमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ ।
उहाँको यो उच्च सफलतामा हामी नेपाली समुदायले ठूलो गर्व गर्छौं।
चर्को आवाजमा कुदाउने १ सय मोटरसाइकल अमेरिकाको न्युयोर्कका मेयरले बुलडोजर लगाएर ध्वस्त पारे
ग्यासको भाउ बढेपछि सङ्घीय कर निलम्बन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा
अमेरिकी संसदमा बन्दुक नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूको सहमति
अमेरिकामा फेरि गोली चल्यो, ३ जनाको मृत्यु, १ सैनिक घाइते
विद्यालयमा गोली हानेर २१ जना मारिए, बचाउ भन्दै फोन आएको ४० मिनेटसम्म त्यही रहेको प्रहरी आएन
युक्रेनको चिन्ता छोडेर आफ्नो देश बचाउँन लाग्न डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई सुझाव
अमेरिकामा एक किशोरले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा १० जनाको मृत्यु, नेपालीको अवस्था के छ ?
अमेरिकामा कैयौं व्यक्तिमाथि गोली प्रहार, धेरैले ज्यान गुमाएको अनुमान
भारत रुससँग टाँसिएको भन्दै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अमेरिकाको धम्की
भनेजति पैसा साथमा विदेश सयर भनेपछि केटालाई के चाहियो !
अनलाईनबाट सवारी चढेकी अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत युवतीको शव जब अस्पतालमा भेटियो
क्यानडामा आन्दोलन दबाउन प्रदर्शनकारीसँग प्रहरी बन्यो क्रुर
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय गरिसकेको अमेरिकी राष्ट्रपतिको दाबी